Gary Neville oo si kulul u weeraray mas’uuliyiinta sarsare ee horyaalka Premier League – Gool FM
(England) 06 Abril 2020. Kabtankii hore hore kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa weerar culus ku qaaday maamulka Premier League, sababa la xiriira inay ka daaheen joojinta horyaalka, muddadii uu socday faafaha Coronavirus.
Mustaqbalka horyaalka Ingiriiska wali lama oga, kaddib markii la joojiyay, talooyin dhowr ah ayaa la soo saaray oo ku saabsan taariikhaha iyo sida loo dhameystiri doono tartanka Premier League, kaasoo ay Liverpool isku diyaarineysay inay u dabaal-degto.
Laakiin Gary Neville ayaa ka faa’ideystay joojinta Premier League si uu u weeraro mas’uuliyiinta horyaalka oo ka daahay ku dhawaaqista go’aankooda, iyagoo isku dayayay inay ciyaaraan wareegyo kale ee dheeri ah.
Haddaba Gary Neville ayaa fariin uu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka wuxuu ku weeraray mas’uuliyiinta horyaalka Premier League wuxuuna yiri:
“Horyaalka Ingiriiska wuxuu u wajahay dhibaatada Coronavirus si aad u xun, wey ka daaheen joojinta tartamada ,waxayna qaateen waqti dheer marka loo bar-bardhigo, tartamada horyaalada kale”.
“Waxay isku dayeen inay ciyaaraan hal wareeg kale oo dheeri ah iyadoo ay jirto dhibaato caafimaad ee guud”.
“Waxay geliyeen ciyaartoy xaalad aad u xun, qof walba oo halkan jooga kuma faraxsana siyaasadooda.”
“Kubadda cagta adduunka waxaa jira dad badan oo leh dano kale oo muhiim ah, kuwaas oo isu yimaada, laakiin marka uu dhaco wax halis ah qof walba wuxuu ka fikiraa nafsadiisa.”
“Waxaa jiri doonta baahi loo qabo in wax laga badalo habka loo maareeyo arrimaha u dhexeeya kooxaha, taageerayaasha iyo ka qeyb galayaasha isboortigan.”